Judson Fish - မင်းမရှိရင်မဖြစ်လို့ (El Naung) | Blind Audition - The Voice Myanmar 2019 - Claire Corlett
Ah Naung auditions blind blind audition fish Jadson Fish judson Judson Fish la voix la voz Myanmar season2the voice The Voice MM The Voice Myanmar the voice myanmar 2019 the voice myanmar season2the voice myanmar season2 မင်းမရှိရင်မဖြစ်လို့ အယ်နောင်း
100 comments on “Judson Fish – မင်းမရှိရင်မဖြစ်လို့ (El Naung) | Blind Audition – The Voice Myanmar 2019”
Noven htoo ပဲကြိုက်​တယ်​
Hero Punk says:
Monica pit says:
Judson お久しぶり だねー
So so nice…..
thant sin ko says:
အရင်တခါက prunk လာလုပ်တာမျိုး ဖြစ်မှာစိုးလို့ နီနီက မလှည့်ခိုင်းသေးတာပါ ….
Don’t be so offended all the time .
Chin up NiNi
hkawn San mäřìp says:
khaw Bliss says:
နီနီက အော်ဗာဒင်းတွေ နည်းနည်းများသလားလို့
သူကဘယ်သူလည်း ၆လာ သိတဲ့သူဝင်လာလို့ရတယ်
NGAYAE LaMin says:
Daddy Arnoe says:
roland tt says:
Fish လာပြီဆိုတော့ ဒီဇိုင်းတွေကတော့ လှပြီ Fashion Week မှာ ၀တ်သမျှကတော့ အလန်းတွေခြည်းဘဲ ဆိုတော့ သီချင်းဆိုရင်တော့ ဘယ်လို့ ဒီဇိုင်းတွေ ၀တ်မလဲဆို တာ ကြည့်ချင်နေမိပြီ အသံကတော့ ယုံပြီးသားဆိုတော့ …
waiyan cycrus says:
ဒိုင်တွေစည်းကမ်းမရှိဘူး တော်တော်လေးကို over heavy ပါ ညီကိုကိုလေးစားပါတယ်ဒိုင်တွေလုံးဝရုပ်ပျက်တယ်
thu ko says:
the voice ကမြန်မာပြည်တခုထဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့လောက်ရုပ်မပျက်ကျပါနဲ့ကမ္ဘာနဲ့တွဲမြင်ပေးပါဗျာသူများနိုင်ငံတေဆိုကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုလဲအဲ့လိုအားပေးနေပါတယ်
Ruth Ohnmar says:
စောက်ပိုမ လုပ်ပါနဲ့ ဖေလိုးမရယ်
floczek mayjalay says:
Johnkham Joviliasi says:
He have agood voice
Thiri Mon says:
Naing Sit Thway says:
The Best Blind Audition of The Voice Myanmar Season 2
ပြန်နားထောင်မိတာ ဘယ်နှခေါက်မှန်း မသိ
Saw Gyi says:
I will vote him နီနီ
ရသစုံ videoများ says:
ငလိုးမ နီနီ ချဉ်လာပီ နေရာတကာကြီးကျတော့ များလာပီ စောင့်သာလိုးပစ်ချင်တော့တယ် ကိုင်း ဆဲပီ
Judges.. Please act and behave like more professional.
နီနီ သွသူပျော်တာ ယူတို့နဲ့ဘာဆိုင်လူ့
Dawei July Rain says:
ဒီနှစ်ရဲ့ ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး အချစ်ဆုံး Idol bro Judson Fish လေး Winner ရပါစေရှင် တစ်နေ့ ဆယ်ခေါက်လို့ အကြိမ်ကြိမ်ခါခါကြည့်နေရတာ
Thiri Wai says:
Myo Min MyoMin says:
Awee.. 😍❤️❤️ He is so handsome 🤩
ပရိတ်သတ်တွေကို..အရင်မိတ်ဆက်ဖို့ မလုပ်ဘဲ ဒီကောင်တွေကောင်မတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ ပုံစံကိုလွတ်ထွက်သွားတာကတော့ မြန်မာဒိုင်တွေရဲ့
စင်ပေါ်ရောက်ရင်. အောက်ခြေလွတ်သွားတဲ့လုပ်ရပ်ကို မြင်လိုက်ရတာဘဲ။
Judson Fish ရဲ့ ဒီဒိုင်ေ်တွ ဘဝမေ့ နေတဲ့ အချိန်လေးမှာသူ ကိုယ်သုမိတ်ဆက်သွားလို့ပရိတ်သတ်သိခွင့်ရတာ။
အဲ့ဒါဘဲ …နိုင်ငံတကာအဆင့်နဲ့ ကွာတယ်ဆိုတာ။
Day Lay says:
Lp Khual Pii says:
Phyoko Phyoko says:
I love you so much naw @fish ❤
Debby N K says:
E Mo Kaung Lay says:
June December says:
that taw says:
ကျနော်အသက်လေးပေါ့ သူက ကျေးဇူးပါ
Philly khai says:
Thang yin says:
piang pi cmcf says:
Kyawzin Kyaw says:
WTF!! NI NI
Ah ghe Ghe yosa says:
mintmay Loe says:
နီနီခင်ဇော် အိုဗာတင်း တွေတအားလုပ်တာ Fuck!
hanmin oo53 says:
မင်းမရှိရင်မဖြစ်လို့ ( ရေး/အယ်ဖြူ ၊ ဆို/အယ်နောင်း ) အဝေးဆုံးလှမ်းသွားဖို့ ခြေလှမ်းတို့ အားနည်းလို့ သတိရစိတ်တို့ ဝမ်းနည်းပြီးလာလို့ မင်းအနီးနားရောက်ဖို့ ခက်ခဲမယ့်လမ်းများမို့ အားနည်းချက်တို့ တားစီးပိတ်ပင်လို့ Cho: အိုး…. မင်းမရှိရင် မဖြစ်လို့ ဟိုးတုန်းက အိပ်မက်တွေမက်လို့ အိုး… ဝေးသွားမှာလည်းစိုး မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ဖြစ်မလာမှကို သူစိတ်ညစ်မှာလည်းစိုး မြတ်နိုးမှုတစ်ခုတည်းမို့ နှောင်ရစ်မိတဲ့ သဘောမို့ ချစ်ခဲ့ပြီးမှ ပြောင်းလဲမပြစ်နိုင်လို့ မင်းအနီးနားရောက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ လမ်းများမို့ အားနည်းချက်တို့ တားစီး ပိတ်ပင်လို့.. သူစိတ်ညစ်မှာတော့စိုး….
Man U Thar Htet says:
သောက်နီနီခင်ဇော် သောက် over တွေမလုပ်စမ်းနဲ့၊ အဲ့ကောင်မက သောက်ပိုတွေတအားလုပ်
ehehpoe nevergiveup says:
Nengpi HK says:
B.Deborah Lalzuithangi says:
MoeMoe Lay says:
နီနီကိုယ် အရမ်းမုန်းအိုဗာတင်းတွေ တစ်အားများ နေတာ
လိဘဲ နီနီကိုကြည့်ရတာ စောက်အိုဗာ
သောင်ရူးမ အိုဗာတင်းသိပ်လုပ်ထာဖဲ နင့်လင်သာ လာတက်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး ဟိုစောင်ရူးကရော သူများဆိုနေတာကို ဘယ်နှယ့် မျက်မှန်ကြီးသွားတပ်ပေးနေတာတုန်း စောက်အိုဗာတင်းတွေချည်းပဲ
ဝေ ယံ says:
yekhaung min says:
zarnihtun 1981 says:
နီနီပြောသွားတဲ့ why the voice myanmar ? ကိုနားမလည်ဘူး
Nay Nay Moe Swe says:
You arealegend Fish… love you <3. Keep up good job.
Damn Kyar Pouk 🤣
ทัน เมียทซอ says:
So good idol
Htay hlaing winwin90 says:
Your verry good amezing likr
Paul austin alot better
Sai Kyaw Zin Hein says:
အသံကတော့ မဆိုးသလိုပဲ ရုပ်ကတော့ ဆိုးတယ် အဲ့ကောင် ရုပ်ကို မကြိုက်တာ